Ahoana ny fomba hamoronana trochoid amin'ny alàlan'ny Photoshop? | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fomba hamoronana trochoid amin'ny alàlan'ny Photoshop?
Ny famolavolana sary dia iray amin'ireo ankamaroan'ny fitsipi-pifehezana misyRaha lazaina amin'ny teny hafa dia sady fanao matihanina no tsy matihanina izay, mahavita manintona olona marobe liana amin'ny fampiharana ity karazana fitaovana ity, noho ny fandrafetana ny asany.
Ny habetsahan'ny saha ahitan'ny mpamorona sary tsy misy fiezahana betsaka dia antony iray hafa mahatonga ny olona matetika midira ao amin'ity famaizana ity. Amin'izany fomba izany, misy ihany koa ny fiheverana hafa azo raisina momba ny famolavolana sary ary ny antony ahafahana mandinika olona marobe liana hiditra amin'ity fifehezana ity.
Miaraka amin'izany, orinasa an-tapitrisany eran'izao tontolo izao matetika no manana manam-pahaizana amin'ny famolavolana sary, izay natokana hanamboarana ny tombo-kasen'ilay orinasa, ary koa hanatanterahana ny asa rehetra mifandraika amin'ny famoronana singa ho an'ny dokam-barotra amin'izy ireo, ankoatry ny lahasa hafa.
Anisan'ireo fiasa marobe, mitondra eto izahay ny iray amin'ireo noheverina indrindra amin'ny alàlan'ny novista mpamorona ary izany no famoronana tarehimarika geometrika, angamba fomba tsara hanombohana an'ity fifehezana ity.
Tutorial momba ny famoronana trochoid
1 Dingana 1
2 Dingana 2
3 Dingana 3
Manokatra Photoshop izahay ary mandroso mamorona sary miaraka amin'ireto masontsivana manaraka ireto:
Sakany: 800 / hahavony: 800
Fomba fandokoana: loko RGB / 8 bit
Manao faribolana manodidina izahay 300 teboka avo, feno manga sy tsy misy soritra. Amin'io sosona io (miaraka amin'ilay fitaovana), dia ovainay ny lisitry ny safidin'ny fitaovana "fanarahana fandidiana" avy amin'ny "sosona vaovao" ho "Mifampidinika amin'ireo faritra misy endrika" ary avy eo manaova faribolana mifanitsy hafa mandra-pahazoana valiny mitovy amin'ny an'ny sarinay.
Ankehitriny dia tsy maintsy rasterize ny sosona, ho fanampin'izany, hanova ny anarana ho "tapa" ary hampidina ny opacity ho 40%.
Ny zavatra manaraka dia ny famoronana ny hetsika izay hamelabelarantsika ny trochoid ary izany no hanokafanay ny tontonana hetsika ary hamorona vondrona hetsika vaovao izahay, izay hiantsoanay hoe "trochoids".
Ao anatiny dia mamorona hetsika antsoina isika trochoid 1 ary omentsika ny lakilen'ny F12, izay ahafahantsika mamerina ny baiko natao imbetsaka.
Manaraka izany dia manoratra izao baiko manaraka izao izahay:
Ataovy avo roa heny ny sosona amin'ny bokotra havanana eo amboniny.
Misafidy ny fitaovana mifindra izahay.
Ampidirintsika ny sary Adjustments / Hue / saturation (Ctrl + U) ary ovay ho 9 ny volony.
Miditra amin'ny fanovana / fanovana (CTRL + T) maimaim-poana izahay ary ao amin'ny menio safidin'ny fitaovana dia ovainay ny 9 rotation ho XNUMXº.
Manaiky ny fanovana izahay amin'ny Enter.
Tsindrio ny bokotra Stop mba hampiatoana ny firaketana ny hetsika.
Izao ihany no anananao mampihatra ny hetsika isaky ny ilaina hamita ny faribolana, ho an'ity tranga ity dia ho in-19 izy ity, ilaina amin'ny fanararaotana ny sisin-tany izay noforonintsika mba hahatonga azy ho F12.
Con Manova / Manova afaka manao ny habe mifanaraka amin'ny tsirontsika isika. Ilaina ny mitadidy ao an-tsaina fa, noho izany, dia tokony hihazona ny Shift isika mba tsy hanovana ny ampahany tsy nahy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny fomba hamoronana trochoid amin'ny alàlan'ny Photoshop?
Inona no eritreretin'ny trondro? tetik'asa fanoharana